Gift Box - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Gift Box)
Igbe Nleta Ihe Onyinye Ejiri ọla edo
Akwukwo Onyinye Mpempe Ejiri Ego ọla edo na-emechi magnetik Nkwakọ ngwaahịa igbe onyinye, igbe maka ịkwado onyinye, dị mfe ma
Kaadiboodu Drawer Box na ụfụfụ maka mgbanaka
Kaadiboodu Drawer Box na ụfụfụ maka mgbanaka Igbe kaadiboodu na-adọta igbe, ezigbo igbe draya igbe maka ịkwado ọla. Igbe Drawer maka mgbanaka, mgbanaka nkwakọ ngwaahịa obere, na-atọ ụtọ na okomoko. Igbe Drawer Ring, ihe osise mara mma nke nwere mbipụta akwụkwọ dị elu, ịkọ ga-eme ka ndị ahịa gị nwee obi ụtọ. Liyang...
Ejiji akpa okpu onyinye okpu nwere okpu
Ejiji okpu igbe okpu ekike okpu Ọ bụrụ na ịchọrọ itinye okooko osisi gị mara mma n'ime igbe ma mee ka ha mara mma, chọọ ịhọrọ igbe nkwakọ ngwaahịa anyị, ụdị dị mfe mana okomoko, ị nwere ike inwe ya n'otu oge. Igbe nkwakọba ifuru na mkpuchi, mgbe ị mepee mkpuchi ahụ, ihe ngosi ifuru mara mma n’ihu gị na isi ísì...
Igbe okpu nkwakọ ngwaahịa okpu okpu nwere mkpuchi
Igbe okpu nkwakọ ngwaahịa okpu okpu nwere mkpuchi H na igbe nkwakọ , yana ezigbo mma ma na-achọ mma, Igbe okpu ndi ahia, nwere nke gi, nke zuru oke na nke uwa, Nkwakọ ngwaahịa okpu okpu, nwere ike iji ya dịka onyinye, ọ dị mfe ma bụrụ ihe mara mma, tụkwasị ndị enyi gị obi. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa...
Igbere Onyinye Ekeresimesi Onyinye Mma Mma
Igbere Onyinye Ekeresimesi Onyinye Mma Mma Igbe okuku nke ekeresimesi, dika onyinye ekeresimesi, oge ekele , Igbe onyinye pillow, ụdị dị ọkụ maka ire ahịa na oke mma, Nkwakọ igbe igbe, kpoo ụdị ngwaahịa niile, uwe, ncha, mmanụ na kandụl ... Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa n'ihu ma chọta Li yang...
Ingnyịnya Igbe Onyinye ojii na UV Logo
Ingnyịnya Igbe Onyinye ojii na UV Logo Igbe onyinye na-acha oji, na-eji oji na-acha ọcha na ntụpọ UV na-emecha, nwere ụdị pụrụ iche. Igbe onyinye, apịaji igbe, mfe ịfefe ma dị mma ile anya. Igbe mpempe akwụkwọ ojii, na-enye onyinye eji emebe ya omenala, ọ mara mma nke
Igbe nkwakọ ngwaahịa Ahịa nke Scarf na Golden Logo
Igbe nkwakọ ngwaahịa Ahịa nke Scarf na Golden Logo Igbe Ahịa Akara Ahịa, igbe onyinye ịchafụ na stamping dị ọkụ, ọrụ obibi akwụkwọ dị elu. Igbe nkwakọ ngwaahịa Scarf, igbe nke akpa ịchafụ, igbe kaadiboodu nwere mkpuchi, igbe matte ojii ịchafụ. Akwukwo ahia nke Scarf, nke edeputara na ya na nke nwere ihe di elu,...
Igbe onyinye dị na Ribbon na-acha ọcha
Igbe onyinye dị na Ribbon na-acha ọcha Igbe onyinye dị ọcha, igbe onyinye maka nkwakọ ngwaahịa, igbe nke na-acha ọcha nwere akara e biri ebi, ezigbo mma na ọnụahịa dị mma. Igbe onyinye na Ribbon, nwere ụta rịbọnụ maka igbe, ọmarịcha na ụdị dị mma. Igbe onyinye mara mma, igbe kaadiboodu nwere mkpuchi, ebiputara omenala...
Igbata kaadiboodu okpokoro onyinye igbe onyinye Igbe onyinye, mpịakọta dị elu na okomoko, ezigbo nhọrọ maka ichikota uwe. Igbe mpempe akwụkwọ mpịachi, ya na rịbọn na ndọta. Igbe mpempe akwụkwọ ahịa, jiri akara mbipụta ya na imecha elu gị, nwee ọrụ ụlọ ọrụ gị. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa n'ihu ma...
Akwukwo onyinye ndi mmadu nwere onyinye di icho mma
Akwukwo onyinye ndi mmadu nwere onyinye di icho mma Igbe kandụl okomoko, nwere ezigbo ọ andụ ma pụrụ iche. Iko akpa kandụl dị ka onyinye, ndị mmadụ nwere ike isi na - akwapụ ya, Igbe kandụl nwere mkpuchi, ị nwere ike ịdị mfe imeghe na ile anya dị mma. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa n'ihu ma chọta Li...
Ejiji kaadiboodu ahaziri onyinye nke kaadiboodu onyinye
Ejiji kaadiboodu ahaziri onyinye nke kaadiboodu onyinye Igbe dị na kandụl dị na kandụl, na ezigbo mma ma na-achọ mma, Akwukwo nke kandụl ebe ịchọrọ ịke, nwere nke gị, nke zuru oke na nke ụwa, Ibe kandụl igbe na mkpuchi, mfe na-emeghe na size.Custom size, N'ezie kwesịrị gị. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa,...
Nkwakọ ngwaahịa onyinye ọla edo edoziri ahaziri nke ọma
Nkwakọ ngwaahịa onyinye ọla edo edoziri ahaziri nke ọma Igbe onyinye ọla, nke nwere ezigbo mma, dị mma maka ịkwakọ ọla dịka onyinye. Igbe akwa drọwa, igbe na-agbanwe ma na klas dị elu, More nwere ike imebi ihe ịchọ mma. Igbe eji etinye onyinye, ihe okike puru iche nye enyi gi ma obu ihu n’anya. Chọrọ ngwaahịa dị mma...
Nkwakọ ngwaahịa onyinye onyinye mmanya dị ụtọ
Nkwakọ ngwaahịa onyinye mmanya mmanya ahaziri iche Nkwakọ ngwaahịa igbe mmanya, ezigbo mma maka ịkwakọ mmanya. Igbe onyinye mmanya, ihe osise pụrụ iche na-eme ka ndị ahịa gị nwee ọ .ụ. Igbe onyinye maka mmanya, nwekwara ike iji ya dịka onyinye, ndị enyi gị ga-amasị ya. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa...
Igbe okomoko Mat Matt na mpempe magnetik
Igbe okomoko Mat Matt na mpempe magnetik Igbe okpokoro okomoko, igbe ọkụ na-eme mpempe akwụkwọ igbe dị mma. Igbe ndọta ndọta, igbe nwere ndọta, odi mfe imepere. Igbe mpempe akwụkwọ, Mpempe akwụkwọ mpịachi ya na iji ya ede akwụkwọ ahaziri, esighi ụdị ọ bụla. Liyang Paper ngwaahịa co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ...
Igbe onyinye Fancy Drawer na UV Logo
Igbe onyinye Fancy Paper Drawer na UV Logo Igbe onyinye drọwa, eserese eji adọpụta ihe maka onyinye, ihe pụrụ iche nke nwere ezigbo mma. Akwukwo Drawer Box, akara ngosi edeputara nke edeputara nke oma, nke di nma maka onyinye. Nkwakọ igbe igbe, igbe ngwugwu onyinye, igbe nnabata maka uwe ma ọ bụ...
Igbe Onyinye Ebube na Ribbon maka Ura
Igbe Onyinye Ebube na Ribbon maka Ura Igbe onyinye na Ribbon, igbe kaadiboodu nke nwere rịbọn, okomoko ma maa mma. Igbe Onyinye Ebube, igbe na-apịaji na -emechapu agba mara mma, nke di nma ma di elu. Igbe onyinye maka ihe eji ehi ura, ihe onyinye eji ebu ura nke
Igbe kaadiboodu ahihia onyinye na mkpuchi
Igbe kaadiboodu ahihia onyinye na mkpuchi Igbe nkwakọ ngwaahịa onyinye, nkwakọ ngwaahịa dị oke ọnụ maka onyinye, ụdị ụtọ na-eme ka ndị ahịa gị nwee ọ .ụ. Nkwakọ ngwaahịa igbe onyinye, ezigbo mma na teepu rịbọn, nwere ụdị pụrụ iche. Igbe onyinye na mkpuchi, mfe imeghe, mkpuchi dị mfe ma ọ bụghị ọnụ ala, nwere ike inye...
Igbe nkpọrọ nwere mpio maka ichikota ntutu
igbe mpempe akwụkwọ na windo maka nkwakọ ntutu igbe dị ọnụ ala, akwụkwọ mpịakọta CMYK ma doo anya PVC dị ọcha iji gosipụta ngwaahịa gị juru n'ọnụ, n'otu oghere dị n’elu iji mee ka ọ kwụgide n’elu oche Li yang obibi akwụkwọ ga - ewetara gị ngwaahịa dị oke ọnụahịa dị mma Anyị kpebisiri ike ime ka afọ ju gị, rute...
Igbe onyinye Cusotm kaadiboodu na Ribbon
Igbe mkpọchi ndọtị